Warshadaha Fudud ee loo Diro Gudaha Huntingdon, Cambridgeshire
Real Estate Listings: » Commercial Real Estate » Industrial premises » GB » Cambridgeshire » Huntingdon » Warshadaha Fudud ee loo Diro Gudaha Huntingdon, Cambridgeshire1
la daabacay 2020-02-09
Nambarka boostada: Pe28 5sb
Astaamaha: Good access to A1(M), Good parking provision, 3 phase power, 4m eaves, The EPC is currently an E (117). A copy of the EPC is available on our website., Available by way of a new lease on terms to be agreed.
Dhismooyinku waxay ka kooban yihiin dhamaadka qaybta warshadaha ee loo yaqaan 'terrace unit unit terrace' oo hadda loo qaybiyay laba qaybood oo leh albaab isku xidha. Gurigu wuxuu kaloo bixiyaa qaddar aad u wanaagsan oo gawaarida la dhigto iyo sidoo kale rarka iyo soo dejinta labada dhinacba haddii loo baahdo. Bakhaarka waxaa ku rakiban kuleyliyaha gaaska ku shaqeeya dabka iyo WC oo keliya.
La xiriir xayeysiistaha 0148057xxxx
Cambridgeshire (oo loo soo gaabiyo Xerooyinka.) Waa degmo ku taal Bariga England, oo xuduudo la leh Lincolnshire dhanka waqooyi, Norfolk dhanka waqooyi-bari, Suffolk dhanka bari, Essex iyo Hertfordshire dhanka koonfureed, iyo Bedfordshire iyo Northamptonshire dhanka galbeed. Magaalada Cambridge waa magaalada gobolka. Nidaamka casriga ah ee loo yaqaan "Cambridgeshire" waxaa la aasaasay 1974 iyada oo loo aqoonsaday isku xidhnaantii gobollada Cambridgeshire iyo Isle of Ely iyo Huntingdon iyo Peterborough, kii hore ee daboolaya gobolka taariikhiga ah ee Cambridgeshire (oo ay kujirto Isle of Ely) iyo kan dambe ee daboolaya gobolka taariikhiga ah ee Huntingdonshire iyo Soke ee Peterborough, taariikh ahaan qayb ka ah Northamptonshire. Waxay ka kooban tahay inta badan gobolka loo yaqaanno Silicon Fen. Degmadu hadda waxay u qaybsan tahay Golaha Deegaanka Cambridgeshire iyo Golaha Magaalada Magaalada Peterborough, kuwaas oo, ilaa iyo 1998, sameysanaya awood midaysan oo gooni ah. Gobolka waxaa ku yaal shan gole degmo, Golaha Magaalada Cambridge, Golaha Degmada Bariga Cambridgeshire, Golaha Degmada Fenland, Golaha Degmada Huntingdonshire iyo Golaha Degmada South Cambridgeshire.
109,750 Pound £ / Bil kasta
25,000 Pound £ / Bil kasta
10,350 Pound £ / Bil kasta
5,500 Pound £ / Bil kasta
9,920 Pound £ / Bil kasta
Iskuulada ku dhow Pe28 5sb